🥇 ▷ Xiaomi Mi Full Screen TV Pro Series Smart TV waa khiyaano, ma mudan tahay iibsan? ✅
Xiaomi Mi Full Screen TV Pro Series Smart TV waa khiyaano, ma mudan tahay iibsan?
Shalay waxay maalin weyn u ahayd soosaarayaasha Aasiya. Shirkadda Shiinaha ayaa soo saartay ‘Xiaomi Mi MIX Alpha’, marka lagu daro xiisaha cajiibka ah ee Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Laba magacyo oo run ah inay u istaagaan kuwa ay xafiiltamaan ee qaybta ugu badan ee waaxda. Laakiin, Rafaaanka Aasiyaanka ah wuxuu kulahaayey gacmihiisa gacmeedkiisa: qoyska reer Smart TV Xiaomi Mi Shaashadda Taleefishinka ee Telefishinka Muuqaalka buuxa, telefishanno caqli badan oo leh 8K qaraar isla markaana u badan inay gaaraan Yurub.
Waxaan inbadan maqalnay wararka laxiriira suurtagalnimada in telefishanada caqliga badan ee soosaaraha fadhigiisu yahay magaalada Beijing ay soo afjari doonaan soo caga dhigashada Spain, laakiin arrimuhu way sii kala caddaanayaan. In ka badan wax kasta sababta oo ah New TV TV Xiaomi Mi oo Dhamaystiran Shaashadda TV Pro Pro Iyagu waa telefishannada ugu horreeya ee taageeraya heerka ‘DVB-T2’. Ama, loo tarjumay Christian, waxay la jaan qaadayaan DTT Yurub.
Smart TV Xiaomi Mi Shaashadda Telefishanka buuxa ee Shaashadda leh waa 8K diyaar
Akhbaar wanaagsan, maadaama kumanaan adeegsadeyaal ah aysan ka labalabeynin Iibso Xiaomi Mi Full Screen TV Pro Series Smart TV Haddii aan imid Yurub. Feejignaada, waxay horey u mareen Hindiya, markaa waqti dheer kuma qaadaneyso inaad waddankeenna timaadid. Dhibaatadu waxay tahay, markii ay matoorada kululeynayeen ka hor intaan la soo bandhigin TV-gaan, waxay ku faaneen xalka 8K. Kaalay, Xiaomi Smart TV oo leh 8K qaraar qiime aad u xun. Guul la hubo.
Laakiin, ugu dambeyntii sidan oo kale ma ahayn. In ka badan wax kasta sababta oo ah soosaaraha Aasiya ayaa noo tuuray laakiin way fiicantahay. Sidee? Iyaga oo u soo bandhigaya TV-yadooda caqliga leh teknoolojiyadda 8K Ready. Ama maxaa isku mid ah, waxay leedahay xalka 4K iyo karti ay dib ugula mid noqoto 8K hagaajinta xalka.
Fikraddan malahan, waxaa soo saaray astaanta Aasiya. Marka si xun ayaan uga baxnaa halkaas. Xaqiiqdii, seddexda moodel ee la soo bandhigay (oo leh dusha sare ee 65, 55 iyo 43 inji) waxay leeyihiin shaashad 4K LCD ah oo leh tayo muuqaal tayo sare leh. Intaa waxaa sii dheer, nidaam ku hadla stereo leh DTS iyo Dolby Audio oo taageeraya, marka arrintan la xiriira annaga nagama niyad jabi doonaan.
Oo ku dar naqshad minimalist ah halka meelaha ugu hooseeya hore ay shaashadda ka dhigayaan protagonist cad, oo ku mashquulsan 97 boqolkiiba oo bannaan, si ay u bixiyaan xalka runtii xiiso leh. Laakiin, waxa ugu wanaagsan ayaa la imanaya qiimahiisa: Moodhka 43-inji wuxuu qaataa 1,499 yuan, in ka yar 200 euro oo la beddelo, nooca 55-inji ah wuxuu ku kacayaa 2,399 yuan 307 euro si loo beddelo, iyo nooca shaashadda 65-inji ah wuxuu joogi doonaa 3,399 yuan, qiyaastii 435 euro si loo beddelo.
Xusuusnow in moodalladaani ay adeegsadaan Patchwall, Xiaomi interface oo laga sameeyay Android TV, inkasta oo noocyada yimaada Hindiya ay si toos ah ugu isticmaalaan nidaamka qalliinka Google ee telefishanka, iyagoo la jaan qaadaya Kaaliyaha Google.
Markaan aragno sicirkiisa adag, qaabeynta xiisaha leh iyo tayada muuqaalka, markay soo galaan Spain, soo iibso kuwa cusub Smart TV Xiaomi Mi Shaashadda Taleefishinka ee Telefishinka Muuqaalka buuxa Waxay noqon doontaa guul la hubo, inkasta oo qiimahaas ay lagama maarmaan tahay in lagu daro qiyaastii 100 -200 yuuro iyadoo ku xiran nooca. Laakiin, ha u dhigin inay laalaabmaan: iyagu ma yihiin 8K.